Lalao Tanki Online aterineto. Play maimaim-poana
Lalao Tanki Online an-tserasera
Asio Force Heroes 1
Vonoy na ho faty 2. Vola ho faty tamin'ny 2012: Part 2 - Mandosira avy any an-efitra
Plazma vaky: Mandrosoa ho any amin'ny Passé
Cactus McCoy 2: Sisa tavela amin'ny Calavera
An'ny hafa firenena; Mandidia Fanafihana
Sambory ny vatomamy
Dzhelidad mahery fo
Mpamono eo amin'ny kilalao miendrika biriky
Maynkraft anaty lava-bato
Man - ny karandohany
Phineas sy Ferb: Ny coaster-roller hantsana
Sniper: feno fankahalana Territory
iPlayer: Andro fiompiana
Fifadian-kanina sy nendasina
Traffic mpamono olona
Superman tamin'ny toerany
iPlayer: Vadinao: Knights sy Princess
TD; fa ny Refaita sy ny dwarves
SpongeBob sy Patrick: Dirty mpihaza taratra
Atsangano 3 mangalatra
Lalao Online Games ho an'ny ankizilahy Games ho an'ny olon-dehibe Fiara mifono vy Online Mitifitra ho an'ny ankizilahy Mitifitra roa Izao tontolo izao ny fiara mifono vy iPlayer Games VKontakte Game Mile Roux
Fiara mifono vy Online no iray hafa mahaliana telo dimensions traikefa ho an'ny mpilalao izay te-hitifitra. Ny lalao noforonina teo amin'ny dikan-ny mahazatra Battle Tank, izay niverina tany amin'ny lalao 1990 hampionona Dandy. Dia namely ny hatsaran-tarehiny rehetra sy ny gameplay, fa ankehitriny ianareo dia ho afaka ny milalao ao amin'ny telo dimensions dikan-ny Arcade ao amin'ny Multiplayer fomba.
Tany am-piandohana ny lalao dia mila misoratra anarana sy handeha amin'ny alalan'ny fanofanana kely izay hilaza aminao ny fomba mihazakazaka ny fiara mifono vy, ny fomba hampivelarana ny mpanohitra sy handresy. Taorian'ny fiofanana dia ho afaka ny hahazo tombontsoa vitsivitsy ho an'ny fampandrosoana bebe kokoa.
Fony tsy mbola ny fiandohan'ny ady hanokatra ny lisitry ny fampiharana, izay azo jerena Na izany na tsy hiaraka ady ianao. Jereo tsara indrindra izany, ary raha toa ianao ka misy mpanao voalohany, tsy hiakatra ho ady lehibe. Azonao atao ihany koa ny mandamina ny ady, raha tsy nahita lisitra mety tsara. Ao amin'ny Tanki Online manana garazy, izay ny lehibe asa ny lalao, dia afaka mividy karazana fitaovana vaovao, hanatsarana efa misy ireo. Dia ahitana saika ny fanatsarana ny ady rehetra milina, avy caterpillars amin'ny barika ny basy sy bala ho azy. Aza manitikitika momba ny tombontsoa isan 'andro izy ireo dia hanampy anao eo amin'ny fampandrosoana, mari-pankasitrahana bebe kokoa ary iantrao faritra.
Ao amin'ny ady tsirairay mba handresy toe-javatra samy hafa, arakaraka izay fomba mifidy ianao na hamorona ny tenanao. Aiza dia ilaina ny handringana ny fahavalony rehetra, any ho any mba hitandrina ny tenany amin'ny alalan'ny banky angona milalao toy ny ekipa, fa any ho any ka nahafaka ny fahavalo saina. Ao amin'ny sarintany ny lalao isan-karazany ny loharanon-karena, nifidy azy ireo dia afaka mampitombo ny fiara tamin'ny andro anankiray, fa tsarovy fa manana fahavalo hafa koa ny mahafantatra ny tombontsoa, ​​Ary mitandrema.
Vola ihany koa ny hafa, dia mety ho ny fomba hanaovana sy fividianana. Ny kristaly, izay namidy misaraka, dia afaka mividy fitaovam-piadiana mahery vaika kokoa sy hanafaingana ny toetr'andro ny ady vondrona.
Online fiara mifono vy mora ny fitantanana vitsy monja fanalahidy ho an'ny hetsika sy ny tifitra, dia misy endri-javatra iray dia afaka miala ny turret izay ny basy. Handresy ny fahavalonareo, ary mahazo traikefa no hamaha soa vaovao, izay manome fidirana ao amin'ny fanekena sy mamorona ny fokony.